> Resource > Video > Sida loo rogo ama farriinta codka Files Audio in MP3
Waxaa laga yaabaa in aad leedahay dhowr fariimaha looduubay oo qiimo ku PC ama telefoonka. Oo waxaa laga yaabaa inaad rabto in aad badbaadin kuwaas files looduubay oo sida MP3 files audio, si aad u maareyn karto fiican iyo iyaga dhawri si joogto ah. Diinta farriinta in MP3 files audio sidoo kale waa hab fiican oo aad email files voicemial dadka kale. Si kastaba, waxa ay noqon doontaa shaqo fudud, haddii aad ka heli kartaa qalab sax ah. In this article, waxaan inta badan doonaa tusaan sida loo badbaadin looduubay oo sida MP3 files ee faahfaahin ah. Qalab aan isticmaalo waa Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ). Waxa ay taageertaa diinta Dufcaddii, si aad u isticmaali kartaa si loogu badalo dhawr files farriinta in MP3 files. Ka sokow, interface fududahay in la isticmaalo, dhakhso ah xawaaraha diinta, iyo tayada audio sameecadda ah ay tahay sababta ugu weyn ee aan u doorato.
Next, waxaana idin tusin doonaa sida loo howlgal talaabada faahfaahsan oo talaabo.
1 shuban files farriinta aad
First of dhan, waxaad u baahan tahay in ay soo dhoofsadaan files farriinta aad u looduubay oo si MP3 Converter. Ogow in haddii files looduubay oo aad ku kaydsan yihiin kaarkaaga SD Phone, waxaad u baahan tahay in ay marka hore iyaga lagu wareejiyo si aad u computer.
Si aad u dajiyaan files kombiyuutar si ay app this, waxaa laga yaabaa in aad riix batoonka Add Faylal ay suuqa kala barnaamijka loo sameeyo.
2 Dooro sida qaab wax soo saarka MP3
App Tani waxaa ku jira ku dhowaad dhammaan video iyo maqal ah qaabab, iyo sidoo kale qalabka iwm in ay liiska qaabka wax soo saarka. Oo iyana waxay si fiican u kala saaraa. Sidaas si fudud aad ka heli karto waxa aad doonayso. Si aad u dooratid MP3 format sida wax soo saarka, waxaad u tagi kartaa "qaab" category, iyo dooro "Audio" subcategory, ee la soo dhaafay, waxaa ka heli doorasho MP3 ah.
3 Beddelaan farriinta in MP3
Hit ah "Beddelaan" button ee geeska gacanta midigta hoose ee suuqa si ay u bilaabaan diinta files farriinta aad u MP3. Waa ok hadda. Converter Tani weyn kaa caawin doona inaad ka shaqeeyaan inta ka dhiman. Xawaaraha diinta waa mid aad u dhakhso ah, oo ma jiro wax farqi ah oo tayo leh cad audio sababta oo ah groundbreaking APEXTRANSTM Technology.
Marka lagu sameeyey, riix "Open Folder" doorasho, oo aad haddiiba ka heli kartaa MP3 faylasha la gediyay.